Askar Faransiis ah oo lagusoo oogay kufsiwadareed ay u gaysteen dalxiise
Abuukate Mario Stasi iyo Sophie Obadia oo matalayey haweenayda Kanadiyanka ah ee la faraxumeeyey oo yimid maxkamadda Paris maanta oo isniin ah. Foto: Foto: François Mori / AP / (NTB scanpix)
Labo askari ayaa la geeyey maxkamad iyagoo ku eedaysan kufwadareed ay ugu gaysteen haweenay Kanadiyaan ah xarunta booliiska ee Paris.
Askartan oo xilliga lagu eedeeyey falkaan ka tirsanaa unug booliis ah oo u xil saarnaa qawlaysato dambiilayaal ah ayaa la sheegay in kufsiga ay ku eedaysan yihiin uu ka dhacay cinwaanka 36 Quai des Orfevres.
Askartan oo maanta maxkamad la geeyey ayaa sheegay in aysan wax kufsi ah gaysan balse ay haweenaydaas isku arkeen qaab aan qabsab ahayn xilli galab ah oo ay khambaro badan cabeen.
Haweenayda ayaa maxkamadda laga hor sheegay in askartani markii hore kula kulmeen meel baar ah kadibna ay gaysteen qayb ka mid ah taliska booliiska halkaas ay falka kula sameeyeen. haweenayda ayaa sheegtay inay ku qasbeen inay cabto qabriga nuuca wiskiga kadib la dhibaateeyey.
Askartan oo aan la xirin hadda ka hor ayey dhici kartaa in ay wajahan xabsi 20 sano ah haddii lagu helo falkan oo midkood markii hore inkiray walow uu dib ka qirtay in uu ku lug lahaa, balse kan kale ayaa sheegay in uusan marna qasbin haweenaydaan.